Korintofo II 4 NA-TWI - Honhom mu agyapade a ɛwɔ nkuku mu - Bible Gateway
Korintofo II 3Korintofo II 5
Korintofo II 4 Nkwa Asem (NA-TWI)
4 Onyankopɔn nam n’adom so de saa asɛm yi abrɛ yɛn na ɛno nti, ɛmma yɛn koma ntu. 2 Yɛagyae kokoamusɛm ne aniwudeyɛ nyinaa. Yɛnnaadaa na yentwa Onyankopɔn asɛm no ho nkontompo. Yɛnnaadaa obi mma onnye nea Kyerɛwsɛm no nkae nni. Yegyae saa aniwudesɛm no nyinaa. Yegyina Onyankopɔn anim kasa enti yɛka nokware ma wɔn a wonim yɛn no nyinaa gye di.